Qiimaynta Ciyaartoyda Kulankii Arsenal & Man City – SADDEX
Arsenal waxay booskeeda ka diyaarsatay finalka FA Cup oo ay u gudubtay markii ay 2-0 ku garaacday Manchester City oo ay isku haleeleen garoonka Wembley.
AFARTA Sababood Ee Zinedine Zidane Ku Qasbay Inuu Dib Usoo
Gunners oo 12kii jeer ee ugu dambeeyey ee ay tagtay semi-finalka, sagaal ka mid ah iska xaadirisay finalka ayaa jidka kusii martay Manchester City, kana aargoosatay guul-darradii ay bishii hore Sky Blues ugu xambaarisay garoonka Etihad, Is-aaragii dib loogu bilaabay horyaalka Premier League bishii June.
Aubameyang ayaa labada goolba u dhaliyey Arsenal, waxaanu midka hore ahaa daqiiqaddii 19aad oo uu isku tuuray kubbad uu difaaca uga soo dul-qaaday Nicolas Pepe, midka labaadna waxa uu kooxdiisa u xaqiijiyey daqiiqaddii 71aad oo kubbad uu difaaca oo badhtamaha garoonka jooga usoo dhaafiyey Tierney uu ka dhex-saaray labada lugood ee goolhaye Ederson.
Weeraryahanka reer Gabon waxa kale oo uu dhalin karayay illaa laba gool oo kale oo fursado caddaan ah uu helay, hase yeeshee nasiibkiisa ayaa ka diiday.
Difaaca Arsenal ayaa shaqo weyn qabtay, waxaase garab siiyey goolhaye Martinez oo aan marna joojin inuu khatar kasta oo kusoo socota isku diyaariyo inuu naftiisa halis ku geliyo.
Difaaca reer Brazil ee David Luiz ayaa iska maydhay ceebtii ka raacday Is-aaragii hore ee Man City oo uu isku dhiibay kubbad, mid kalena rikoodhe galay, isla markaana uu casaan qaatay.
Luiz ayaa ciyaartan hab-difaacis layaab leh sameeyey, waxaanu qayb ka qaadanayay dhismaha kubadda ee Arsenal, iyadoo uu degganaan iyo naxdin la’aan ku waajahayay ciyaartoyda orodka badan ee Manchester City.
33 jirkan ayaa xiddiggii ciyaarta ku garaacay Aubameyang iyo Tierney oo ay qiimaynta ciyaarta isku mid ka ahaayeen, waxaanay saddexdooduba heleen min 9 darajada qiimaynta, hase yeeshee David Luiz ayaa xiddignimada la siiyey.
Ciyaaryahannada Manchester City ayay dhamaantood liidatay darajada qiimaynta ciyaarta ay ka heleen, waxaana kaliya oo darajo wanaagsan helay Kevin de Bruyne oo si fiican u shaqaynayay.
Shan ciyaartoy oo Manchester City ah ayaa helay darajada 5 oo ahayd qiimayntii ugu liidatay ee ciyaarta.
Qiimaynta ciyaartoyda labada kooxood oo dhamaystiran:
Beddelka: Torreira (N/A), Willock (N/A)
Beddelka: Rodri (6), Foden (6)
axadle 3877 posts